PC မှာ Android OS ကိုတင်သုံးကြမယ် | IT Sharing Network
အရင်ဆုံး VirtualBox Install လုပ်ပုံကို ဖော်ပြပါ့မယ်...
ပုံသေးနေပါက အကြီးမြင်ရရန် ပုံကို နှိပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
Download မှရလာသော VirtualBox ကို Install လုပ်ရန် Double Click နှိပ်ပါ...
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း တဆင့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါ...
ဒီနေရာမှာ VirtualBox Install လုပ်ခြင်း ပြီးပါပြီ...
VirtualBox ပေါ်မှာ Android OS အသုံပြုဖို့အတွက် Setting ချရပါမယ်...
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း New ကိုနှိပ်ပါ..
Name နေရာမှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နာမည်ပေးနိုင်ပါတယ်..
Type နေရာမှာ ဘေးကမြှားလေးကို နှိပ်ပြီး Linux ကိုရွေးပြီး
Version နေရာတွင် Other Linux ကိုရွေးပါ... ပြီးလျှင် Next ပါ...
ဒီနေရာကတော့ VirtualBox အသုံးပြုဖို့ Memory သတ်မှတ်ပေးတာပါ...
မိမိ Memory အနည်းအများအလိုက် ပေးနိုင်ပါတယ်... 512 လောက်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်...
VirtualBox အတွက် Hard drive ကို ပမာဏသတ်မှတ်ပေးတာပါ... Create ကိုနှိပ်ပါ...
Start ကို နှိပ်ပါ...
ပုံတွင်ပြထားသည့် အတိုင်းတက်လာပါက မြှားပြထားသည့် Folder ကိုနှိပ်ပြီး
Download မှရလာသော Android OS သိမ်းဆည်းထားသည့် နေရာကို သွားပြီး Select လုပ်ထည့်ပါ...
VirtualBox ဖြင့် သုံးမှာဖြစ်သည့်အတွက် Live CD ကို ရွေးပေးပြီးသားမို့ Enter နှိပ်ပါ...
ကြိုက်လို့ အပြီးတင်ချင်ရင် Install ပေါ့နော်...
Android OS ကို VirtualBox ပေါ်မှာ တင်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ...
Android နည်းလမ်းများ နည်းပညာ Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
i can install virtual,but i can't install android at window7 ,pl help brother,thanks.
Skjold Thant said...
Android OS ဘယ် version ဖြစ်ဖြစ်တင်လို့ရမလား
ကျွန်တော် အဲ့ဒီ လိုတင်ပီးသွားပီဗျာ ကျွန်တော် ဂိမ်းတို့ ဘာတို့ ထပ်ထဲ့ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြပါအုံး
ကျွန်တော် ဂိမ်းတွေစမ်းချင်လို့ပါ ပီးတော့ ဖုန်း android apk တွေစမ်းချင်လို့ အဲ့ဒါ ဘယ်လို ထပ်သွင်းရတယ် ဆိုတာ ညွန်ပြပါအုံးဗျာ
အခု လိုဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်